Arduino Gadzira ikozvino inowirirana neGnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Izvo zvave kuwedzera kuwanda kuona uye kuva Mahara Hardware mahwendefa mumaoko edu. Hardware mabhodhi kana zvishandiso zvinogovera zvakafanana uzivi seGnu / Linux. Asi, zvinoshamisa, iyo software yemidziyo iyi haina kusununguka sezvazvinoratidzika.
Chimwe chezvirongwa zvakakosha zveArduino Project, Arduino Gadzira, yasvika pakupedzisira Gnu / Linux. Mushure memwedzi yakati wandei yekuvapo uye kuvandudzwa kwevagadziri veArduino Project, mafomu avo anogona kuendeswa kumabhodhi ane Linux makomputa.
Arduino Gadzira isoftware yekuvandudza yeArduino mabhodhi ari mune online fomati, ndiko kuti, haigone kutorwa pasi asi inogona kuwanikwa kure. Izvi zvinotora kuti zvinoshanda pane chero chikuva, kusanganisira Gnu / Linux, asi iwe haugone kuendesa ako ega mafomu kuburikidza nechirongwa ichi neGnu / Linux kugoverwa, zvakangoshanda chete nekuenda ku yako huru webhusaiti uye zvakananga kubva Arduino Gadzira.
Arduino Gadzira ichakwanisa kushanda pamakomputa neGnu / Linux
Zvino, izvi zvachinja uye tinogona kuwana software yatinogadzira tobva tatumira kubhodhi redu kure pasina matambudziko. Tinogona kuita zvikumbiro zvakagadzirirwa iyo X86 chikuva kuti iongororwe natively munzvimbo dzeLinux, zveizvi tinozvigadzira neArduino Gadzira uye wozvirodha kuchikwata chedu, ipapo tinogona kuvapfuudza kune yedu Arduino bhodhi.
Iyi nhau ndeyekufambira mberi kukuru kune vazhinji vanogadzira sezvo avhareji chimiro yeArduino mugadziri ane hunyanzvi hwemakomputa pamwe nekubata mamiriro eGnu / Mahara Saka kusvika kweArduino Gadzira kunzvimbo dzeGnu / Linux ndiyo mhinduro kuchikumbiro chaunoda.
Kana iwe uchinyatsosarudza chimwe chishandiso kana uri kutsvaga chishandiso chemuno, kune yepamutemo IDE yeArduino. Tinogona kuwana iyi IDE kubva pane izvi peji peji uye isu tinogona kuiisa nyore uye nekukurumidza kuburikidza neiyo terminal. Iwe zvakare uchawana iyo package yekuisa pane zvakachipa mapuratifomu akadai seRaspberry Pi. Ini pachangu ndinofunga inhau dzakanaka nekuti dzichatibvumidza isu kukudziridza nekudzidza naArduino nerusununguko uye chengetedzo yezvirongwa zvedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Arduino Gadzira ikozvino inowirirana neGnu / Linux
Microsoft Paint: dzakanakisa dzimwe nzira dzeLinux